ဗေဒင် ယတြာ Archives - ShwengweGames
(၇)ရက်သားသမီးများ အတွက်18.9.2021 မှ 24.9.2021 အထိ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
September 18, 2021 by Shwengwe Games
ဒီကာလမှာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ မိသားစုဝင်တွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရမဲ့ကာလပါပဲ,မိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်း အထက်လူကြီးတွေရဲ့ကူညီမစခြင်းကိုတော့ ရမဲ့ကာလပါတစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက်က အကူအညီပေးမဲ့ အချိန်ပါ။ အများနဲ့စုပေါင်းလုပ်ရသောအလုပ်၊အတူတကွတတ်ညီလက်ညီလုပ်ရသောကိစ္စရပ် တွေမှာ အောင်မြင် မှုရပါလိမ့်မယ်….
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဦးစီးဦးဆောင်ပြု၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ် တို့တွင် လည်းကောင်း၊ သူများဝန်ထမ်းနေရသူတို့တွင်လည်းကောင်း ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အထူးကြိုးစားပြီး လုပ်နေရတတ်ပါ သည်။ ဒီကာလဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်
အကောင်းအဆိုးရောထွေးနေတဲ့အချိန်ပါ, မိမိတွင် ချစ်သူရှိ နေသော်လည်း မိမိအား ချစ်ရေးဆိုသူတို့ ရှိနေတတ်ပါသည်, ပူပင်မှုအနည်းငယ် ရှိနေ တတ်သော်လည်း အချစ်ရေး ကောင်းမွန်နေတတ်ပါသည်, အိမ်ထောင်မရှိလျှင် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်, အိမ်ထောင်ရေး သင့်ပေမဲ့ ကြားလူတွေကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်,
ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေတတ် ပါသည်, ကျန်းမာ ရေး ကတော့ အဖျားအနာရောဂါ၊ ခေါင်းအုံ, ခေါင်းမူးခြင်း,ခန္ဓာကိုယ် အရေပြား ပေါ်၌ ယားနာများ၊ အရေပြားရောဂါ၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း, မျက်စိမှုံခြင်းများ စသည်တို့ကို သတိထားသင့်ပါသည်…
အကျိုးပေးဂဏန်း -၈၊၅၊၄ အထူးဟော ,ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ယတြာ ,ရဟန်းသံဃာတွေကိုအားဆေးလှူလိုက်ပါ။
စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှအရာရာကိုလုပ်သင့်တဲ့ အချိန်ပါပဲ, ဘာကိစ္စကိုမဆိုခေါင်းအေးအေးထားပြီး ဆုံးဖြတ် ချက် ချ ပါ, ဒီကာလာဟာ မိမိစိတ်ကူးအတိုင်း ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုးတွေကြုံရဖို့ နည်းမှာပါ,အလုပ်ထဲမှာ အလွန်စိတ်ညစ်ရမဲ့ကိစ္စတွေကြုံလာရတတ်ပါတယ်. စီးပွားရေးကံမကောင်းသေးပါဘူး, ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ထွက်တတ်ပါတယ်, မိသားစုအတွင်း မကြေလည်မှုတွေများနေတတ်တယ်…
ငွေက ညံ့နေတဲ့အတွက် ရစရာရှိတာတွေမရနိုင်သေးသလို ပေးစရာရှိတာတွေလဲမပေးနိုင်သေးတဲ့အချိန်ပါ,မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သော လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ် အောင် လိုက်လျောညီထွေစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်စွမ်းများရှိဖို့လိုသည်, စီးပွားဖက်များနှင့်လဲ အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစား၍ လိုက်လျော ညီထွေစွာ ပြောဆိုပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိမှာသာ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်….
ချစ်သူမရှိလျှင် ချစ်သူတွေ့ရ တတ် သလို ချစ်သူရှိပြီးလျှင်လည်း ချစ်သူသစ်ကို တွေ့ရ တတ်ပါ သည် မိမိအားချစ်ခင်နှစ်သက်သူတို့ ရှိနေတတ်ပါသည်. ချစ်သူနှင့် မထင်မှတ်ပဲ မှားယွင်းတတ် ပါသည်, အိမ်ထောင်ရေး အညံ့ဆုံးမဟုတ်သော်လည်း မကောင်းသေးပါ,ကျန်းမာရေးကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရောဂါဝေဒနာများ မရှိတတ်သော်လည်း အနည်းငယ်တော့ သတိထားရ တတ် ပါသည်…
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂၊၅၊၄ အထူးဟော ကံညံနေသည်။ယတြာ ကိတ်မုန့်ဝယ်ပြီးခွေးစာကျွေးလိုက်ပါ။
ဒီကာလဟာအလုပ်တာဝန်တွေပိနေချိန်ပါပဲ, ဒါကြောင့်ပဲ လူလဲပင်ပန်းရသလို စိတ်လဲပင်ပန်းရတတ်ပါ တယ်။ အိပ်ချိန်ကလွဲပြီးကျန်အချိန်တွေအလုပ်ရှုပ်နေရမယ်, လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စ ရပ်များ အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက် လည် ပတ်နိုင်ရန်အတွက် တစ်ချို့သော လုပ်ငန်းများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေရတတ် ပါ သည်, ချစ်သူ၊ ခင်သူ ပေါများနေတတ်သော်လည်း အချစ်ရေးတွင် စိတ်တိုင်းကျမှု နည်းပါးနေတတ် ပါ သည်…
သစ္စာရှိသော ချစ်သူ ရှားပါးနေတတ်ပါသည်, အချစ်ရေး မကောင်းသေးသော်လည်း သင့်ပါသည်။ အိမ်ထောင် ရေးတွင် အခက်အခဲအနည်းငယ် ရှိနေတတ်ပါသည်, အိမ်ထောင်ရှိပြီးသူများလည်း မောင် တစ် ရွာ၊ မယ်တစ်မြို့ ခွဲခွာ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေရတတ်ပါသည်, မိမိသင်ကြားမှုပြုနေသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ တွင် သဘောမပေါက် မရှင်းလင်းသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများအတွက် ကျွမ်းကျင်လိမ်မာသော ဆရာကောင်းများ ထံတွင်ဖြစ်စေ၊ နားလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းထံတွင်ဖြစ်စေလေ့လာဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်…
ကျန်းမာရေးတွင် ကြီးမား သော ရောဂါဝေဒနာများ မဖြစ်ပေါ်တတ်ပါ။ သို့သော် နားနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါ၊ နှာခေါင်းနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါ၊ ရေနှင့်ပတ်သက်သော အန္တရာယ် စသည်တို့ကို အထူးသတိပြုပါ…
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇၊၆၊၃အထူးဟော အလုပ်ရှုပ်မည်။ယတြာ ရွက်လှလေးညွှန့် ဘုရားလှူ ပါ။
ရပ်ဝေးမှ ဧည့်ကောင်းဆောင်ကောင်းများလဲ ရောက်လာတတ်ပါတယ်, စီးပွားရေးတွေ ချဲ့ထွင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အထိုင်အလုပ်များ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများ အထူးပဲ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အချိန်ပါပဲ, အထက်အလူကြီးများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊အောက်လက်ငယ်သားများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း အဆင်ပြေမှုရှိစေရန် ကြား ကနေ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ပြုရတတ်ပါသည်…
သို့သော် မိမိနှင့် အဆင့်တူ၊ အတန်းတူ ရှိသော သူများ၏ အထင်လွဲခြင်း၊ အမြင်မကြည်ခြင်းနှင့် မကောင်း ပြောခြင်းများကို ကြုံတွေ့ရတတ် ပါသည်, ယှဉ်ပြိုင်တိုက် ခိုက် မှုများကြားမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိနေတတ်ပါ သည်, အရှိန် အဟုန်မပျက် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရန် သည်းခံပြီးဆက်သွားနိုင်ဖို့လိုပါ တယ်။ ချစ်ရေးဆိုသူတို့ ရှိနေတတ် ပါသည်,အချစ်ရေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်…
အချစ်ရေးကောင်းနေတတ်ပါသည်, လူသိ ရှင်ကြား မဟုတ်သော်လည်း မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်, ဇွဲ၊ ဝီရိယ အားစိုက်မှု ကောင်းနေခြင်း ကြောင့်လည်း ပညာရေးတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိပ, သို့သော် အနည်းငယ်တော့ သတိထားရတတ်ပါသည်။ ရာသီ အပြောင်းအလဲတွင် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးတုန်၊ ရင်ခုန်၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းများကြုံရနိုင်ပါတယ်…
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇၊၄၊၈အထူးဟော ဆွတ်ပျံကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ယတြာ ရဟန်းသံဃာတွေကို ထန်းလျက်များများလှူပါ။
ရှယ်ယာအလုပ်များအထူးအလုပ်များရမဲ့အချိန်ပါပဲ,အရာရာကိုအမှန်အတိုင်းပြောဆိုတာက အကောင်းဆုံး အခြေ အနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်, အိုးအိမ်ကိစ္စ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ ၊အမွေကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမဲ့ အချိန် ပါလက်ရှိလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတိုက်အခံများနှင့်အခက်အခဲများ ကြုံနေရ တတ်ပါ သည်, အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များတွင် အဆင်ပြေနိုင်သည်…
မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း၌ ပြောဆိုပေါင်းသင်းရမှုများတွင် များသောအားဖြင့် အဆင်ပြေမှုများ ရရှိနေတတ်ပါ သည်, တစ်ခါတစ်ရံ အထင်လွဲခံရတတ်ခြင်းနှင့် မကောင်းပြောဆိုခြင်း များကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါ သည်။ စီးပွားရေး ကိစ္စများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များတစ်ဖက်နှင့် ပညာရေးကို ကြိုးစားနေရတတ်ပါသည်,အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားမှ ပညာသင်ကြားမှုပြုနေရသည့်အတွက်အပင်ပန်းခံရတတ်ပါသည်,ကျန်းမာ ရေးတွင်လေထိုးလေ အောင့် ဖြစ်ခြင်း၊ ဆေးထိုးဆေးစားမှား၍ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ စသည်တို့ကို သတိပြုရတတ် ပါသည်…
မိမိ၏ အချစ်ရေးတွင် ကြားလူ ဝင်ရှုပ်မှုများ၊အနှောက်အယှက်များလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါသည်, သို့သော် အချစ်ရေး သင့် ပါသည် မုဆိုးဖို မုဆိုးမ၊တစ်ခုလတ်တို့က လာရောက်ချစ်ရေးဆိုတာမျိုးကြုံရ တတ်ပါတယ်, အိမ်ထောင်ရေးမှာ တော့ အဘက်ဘက်က စိတ်ချမ်းသာစရာများပါတယ်…
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂၊၁၊၅အထူးဟော စုတ်(သို့) လာဘ်ဝင်မည်။ယတြာ မြေပဲကြော် ဘုရားကပ်ပါ။
ပြောဆို ဆုံးမရခက်တဲ့ သားသမီးတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရမယ်။ မိသားစုအတွင်း မပြေလည်မှုတွေ များ နေမယ်။ စကားအပြောအဆိုမဆင်ခြင်တာမျိုး ၊သတိမမူဘဲ ပြောမိလိုက်သောစကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဖြေရှင်း ရလိမ့်မယ်။ ကံကြမ္မာ အနည်းငယ်ညံ့နေချိန်ပါပဲ, အနီးကပ်လူတွေရဲ့ ဒုက္ခပေးခြင်းခံရမည်။ သေချာကြံစည်လုပ်ကိုင် ထားသောအလုပ်တွေပျက်ရတတ်တယ်, ခရီးဝေးသွားခြင်း ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ကာလပါ…
ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထွေထွေထူးထူးရောဂါများ မဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း အနည်းငယ် တော့ သတိထားရတတ်ပါသည်။ သည်းခြေမှစ၍ဖြစ်သောရောဂါ၊ အပူကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ ဖြစ်ရ တတ် ပါ တယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်မယ်, နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးမဲ့သူတွေ ဝန်းရံနေတတ်တဲ့အတွက်သတိထားပါ, အချစ်ရေးကောင်း နေတတ်ပါသည်…
လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အပေါင်းအသင်းများထဲမှ ချစ်သူ တွေ့ရတတ် ပါသည်။ သို့သော် ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးကွဲဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး မကောင်း သေး ပါ, အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေတတ်ပါ သည်။ ပညာရေးအတွက် အကူအညီ အထောက်အပံ့များ ရရှိ တတ်ပါသည်, ပညာရေးအတွက် ဇွဲ၊ ဝီရိယ စွမ်းအား စိုက်ထုတ်မှုများသာ မိမိကအားစိုက်ဖို့လိုပါတယ်…
အကျိုးပေးဂဏန်း ၈၊၄၊၅အထူးဟော စကားပြောဆင်ခြင်တာအညံ့အဆိုးတွေ ကင်းပါလိမ့်မယ်။ယတြာ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူ ပေးပါ။
လူအများကြား ထင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ လူအများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံရမည်။ဒီကာလအတွင်းမိမိတို့ဖြစ်ချင်တာ တွေကို ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များအလုပ်အော်ဒါတွေများပြီး မအားလပ်နိုင်အောင် ဖြစ်ရ တတ်ပါတယ်။ အတွေးမှန် အမြင်မှန် အယူအဆမှန်ကန်မှုကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းနေမှာပါပဲ။ ခရီး သွားဖို့လဲ အကြောင်းဖန် လာပါလိမ့်မယ်, အယူအဆမတူ အတွေးအခေါ်မတူသူတွေကြား မိမိကစေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ပေးလိုက် ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်….
ဒီကာလအတွင်း အမှုကိစ္စကြုံရသူတွေ အမှုအခင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်, စိတ်ဝမ်းကွဲနေသူများအားနားဝင်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်,စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတို့တွင် အောင်မြင်မှု၊ မြက်စွန်းမှု ရရှိနေတတ်ပါသည်, သူများကဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တွင် အနည်းငယ်မှေးမှိန်နေတတ်ပါသည်, ချစ်သူဟောင်း၏ စွန့်ခွာမှုကို ခံရတတ်ပါသည်, ချစ်သူအသစ်၏ ချစ်ရေးဆိုမှုကိုလည်း ခံရတတ် ပါသည်…
အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အသောက်အစားများနေတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်သန်းစွမ်းမှု ရှိနေ တတ်သလို ကျန်းမာရေး ဝေဒနာ လည်း နည်းပါးနေတတ်ပါသည်။သို့သော်သွေးသားမသန့်ရှင်းမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်တတ် သော အရေပြားရောဂါကိုတော့သတိထားပါ…
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇၊ဝ၊၄အထူးဟော လိမ်မပြောပါနဲ့။ယတြာ ပေါင်မုန့် ၅ချပ်ဘုရားကပ်လှူပါ။
ရရက်သားသမီးအပေါင်း ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးနှင့် ကပ်၃ပါးဘေးမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ
ဆရာငြိမ်းအေးလူ ဗေဒင်သုတေသီ အားခရက်ဒစ်ပေးပါသည်…
ဒီကာလမွာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ မိသားစုဝင္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရမဲ့ကာလပါပဲ,မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္း အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕ကူညီမစျခင္းကိုေတာ့ ရမဲ့ကာလပါတစိမ္းမိန္းမတစ္ေယာက္က အကူအညီေပးမဲ့ အခ်ိန္ပါ။ အမ်ားနဲ႔စုေပါင္းလုပ္ရေသာအလုပ္၊အတူတကြတတ္ညီလက္ညီလုပ္ရေသာကိစၥရပ္ ေတြမွာ ေအာင္ျမင္ မႈရပါလိမ့္မယ္….
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္ တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ သူမ်ားဝန္ထမ္းေနရသူတို႔တြင္လည္းေကာင္း ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အထူးႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေနရတတ္ပါ သည္။ ဒီကာလဟာတနဂၤေႏြသားသမီးေတြအတြက္
အေကာင္းအဆိုးေရာေထြးေနတဲ့အခ်ိန္ပါ, မိမိတြင္ ခ်စ္သူ႐ွိ ေနေသာ္လည္း မိမိအား ခ်စ္ေရးဆိုသူတို႔ ႐ွိေနတတ္ပါသည္, ပူပင္မႈအနည္းငယ္ ႐ွိေန တတ္ေသာ္လည္း အခ်စ္ေရး ေကာင္းမြန္ေနတတ္ပါသည္, အိမ္ေထာင္မ႐ွိလွ်င္ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါသည္, အိမ္ေထာင္ေရး သင့္ေပမဲ့ ၾကားလူေတြေၾကာင့္စိတ္ဝမ္းကြဲရတတ္ပါတယ္,
ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႐ွိေနတတ္ ပါသည္, က်န္းမာ ေရး ကေတာ့ အဖ်ားအနာေရာဂါ၊ ေခါင္းအုံ, ေခါင္းမူးျခင္း,ခႏၶာကိုယ္ အေရျပား ေပၚ၌ ယားနာမ်ား၊ အေရျပားေရာဂါ၊ မ်က္႐ိုးကိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း, မ်က္စိမႈံျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို သတိထားသင့္ပါသည္…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း -၈၊၅၊၄ အထူးေဟာ ,က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ယၾတာ ,ရဟန္းသံဃာေတြကိုအားေဆးလႉလိုက္ပါ။
စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွအရာရာကိုလုပ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ, ဘာကိစၥကိုမဆိုေခါင္းေအးေအးထားၿပီး ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ခ် ပါ, ဒီကာလာဟာ မိမိစိတ္ကူးအတိုင္း ေျဖးေျဖးမွန္မွန္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုးေတြၾကဳံရဖို႔ နည္းမွာပါ,အလုပ္ထဲမွာ အလြန္စိတ္ညစ္ရမဲ့ကိစၥေတြၾကဳံလာရတတ္ပါတယ္. စီးပြားေရးကံမေကာင္းေသးပါဘူး, ေ႐ႊေငြ လက္ဝတ္ရတနာေတြ ထြက္တတ္ပါတယ္, မိသားစုအတြင္း မေၾကလည္မႈေတြမ်ားေနတတ္တယ္…
ေငြက ညံ့ေနတဲ့အတြက္ ရစရာ႐ွိတာေတြမရႏိုင္ေသးသလို ေပးစရာ႐ွိတာေတြလဲမေပးႏိုင္ေသးတဲ့အခ်ိန္ပါ,မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္ ေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္စြမ္းမ်ား႐ွိဖို႔လိုသည္, စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္လဲ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ ေျပာဆိုေပါင္းသင္း ဆက္ဆံႏိုင္စြမ္း႐ွိမွာသာ အဆင္ေျပ လိမ့္မယ္….
ခ်စ္သူမ႐ွိလွ်င္ ခ်စ္သူေတြ႕ရ တတ္ သလို ခ်စ္သူ႐ွိၿပီးလွ်င္လည္း ခ်စ္သူသစ္ကို ေတြ႕ရ တတ္ပါ သည္ မိမိအားခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတို႔ ႐ွိေနတတ္ပါသည္. ခ်စ္သူႏွင့္ မထင္မွတ္ပဲ မွားယြင္းတတ္ ပါသည္, အိမ္ေထာင္ေရး အညံ့ဆုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း မေကာင္းေသးပါ,က်န္းမာေရးကေတာ့ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား မ႐ွိတတ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေတာ့ သတိထားရ တတ္ ပါသည္…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂၊၅၊၄ အထူးေဟာ ကံညံေနသည္။ယၾတာ ကိတ္မုန္႔ဝယ္ၿပီးေခြးစာေကြၽးလိုက္ပါ။
ဒီကာလဟာအလုပ္တာဝန္ေတြပိေနခ်ိန္ပါပဲ, ဒါေၾကာင့္ပဲ လူလဲပင္ပန္းရသလို စိတ္လဲပင္ပန္းရတတ္ပါ တယ္။ အိပ္ခ်ိန္ကလြဲၿပီးက်န္အခ်ိန္ေတြအလုပ္႐ႈပ္ေနရမယ္, လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥ ရပ္မ်ား အ႐ွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ လည္ ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ေနရတတ္ ပါ သည္, ခ်စ္သူ၊ ခင္သူ ေပါမ်ားေနတတ္ေသာ္လည္း အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္တိုင္းက်မႈ နည္းပါးေနတတ္ ပါ သည္…
သစၥာ႐ွိေသာ ခ်စ္သူ ႐ွားပါးေနတတ္ပါသည္, အခ်စ္ေရး မေကာင္းေသးေသာ္လည္း သင့္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ေရးတြင္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ ႐ွိေနတတ္ပါသည္, အိမ္ေထာင္႐ွိၿပီးသူမ်ားလည္း ေမာင္ တစ္ ႐ြာ၊ မယ္တစ္ၿမိဳ႕ ခြဲခြာ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရတတ္ပါသည္, မိမိသင္ၾကားမႈျပဳေနေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား တြင္ သေဘာမေပါက္ မ႐ွင္းလင္းေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္လိမ္မာေသာ ဆရာေကာင္းမ်ား ထံတြင္ျဖစ္ေစ၊ နားလည္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းထံတြင္ျဖစ္ေစေလ့လာဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္…
က်န္းမာေရးတြင္ ႀကီးမား ေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား မျဖစ္ေပၚတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ နားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ၊ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္ စသည္တို႔ကို အထူးသတိျပဳပါ…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇၊၆၊၃အထူးေဟာ အလုပ္႐ႈပ္မည္။ယၾတာ ႐ြက္လွေလးၫႊန္႔ ဘုရားလႉ ပါ။
ရပ္ေဝးမွ ဧည့္ေကာင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလဲ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္, စီးပြားေရးေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အထိုင္အလုပ္မ်ား၊ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးမ်ား အထူးပဲ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ, အထက္အလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း အဆင္ေျပမႈ႐ွိေစရန္ ၾကား ကေန ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ျပဳရတတ္ပါသည္…
သို႔ေသာ္ မိမိႏွင့္ အဆင့္တူ၊ အတန္းတူ ႐ွိေသာ သူမ်ား၏ အထင္လြဲျခင္း၊ အျမင္မၾကည္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္း ေျပာျခင္းမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ ပါသည္, ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ ခိုက္ မႈမ်ားၾကားမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ ႐ွိေနတတ္ပါ သည္, အ႐ွိန္ အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သည္းခံၿပီးဆက္သြားႏိုင္ဖို႔လိုပါ တယ္။ ခ်စ္ေရးဆိုသူတို႔ ႐ွိေနတတ္ ပါသည္,အခ်စ္ေရး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္…
အခ်စ္ေရးေကာင္းေနတတ္ပါသည္, လူသိ ႐ွင္ၾကား မဟုတ္ေသာ္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါသည္, ဇြဲ၊ ဝီရိယ အားစိုက္မႈ ေကာင္းေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရ႐ွိတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ႐ွိပ, သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ေတာ့ သတိထားရတတ္ပါသည္။ ရာသီ အေျပာင္းအလဲတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလုံးတုန္၊ ရင္ခုန္၊ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမ်ားၾကဳံရႏိုင္ပါတယ္…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇၊၄၊၈အထူးေဟာ ဆြတ္ပ်ံၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ပါ။ယၾတာ ရဟန္းသံဃာေတြကို ထန္းလ်က္မ်ားမ်ားလႉပါ။
႐ွယ္ယာအလုပ္မ်ားအထူးအလုပ္မ်ားရမဲ့အခ်ိန္ပါပဲ,အရာရာကိုအမွန္အတိုင္းေျပာဆိုတာက အေကာင္းဆုံး အေျခ အေနတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္, အိုးအိမ္ကိစၥ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ၊အေမြကိစၥေတြ အဆင္ေျပမဲ့ အခ်ိန္ ပါလက္႐ွိလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေနရ တတ္ပါ သည္, အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပႏိုင္သည္…
မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း၌ ေျပာဆိုေပါင္းသင္းရမႈမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆင္ေျပမႈမ်ား ရ႐ွိေနတတ္ပါ သည္, တစ္ခါတစ္ရံ အထင္လြဲခံရတတ္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေျပာဆိုျခင္း မ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါ သည္။ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတစ္ဖက္ႏွင့္ ပညာေရးကို ႀကိဳးစားေနရတတ္ပါသည္,အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ပညာသင္ၾကားမႈျပဳေနရသည့္အတြက္အပင္ပန္းခံရတတ္ပါသည္,က်န္းမာ ေရးတြင္ေလထိုးေလ ေအာင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ေဆးထိုးေဆးစားမွား၍ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ စသည္တို႔ကို သတိျပဳရတတ္ ပါသည္…
မိမိ၏ အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူ ဝင္႐ႈပ္မႈမ်ား၊အေႏွာက္အယွက္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္, သို႔ေသာ္ အခ်စ္ေရး သင့္ ပါသည္ မုဆိုးဖို မုဆိုးမ၊တစ္ခုလတ္တို႔က လာေရာက္ခ်စ္ေရးဆိုတာမ်ိဳးၾကဳံရ တတ္ပါတယ္, အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေတာ့ အဘက္ဘက္က စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ားပါတယ္…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂၊၁၊၅အထူးေဟာ စုတ္(သို႔) လာဘ္ဝင္မည္။ယၾတာ ေျမပဲေၾကာ္ ဘုရားကပ္ပါ။
ေျပာဆို ဆုံးမရခက္တဲ့ သားသမီးေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ မိသားစုအတြင္း မေျပလည္မႈေတြ မ်ား ေနမယ္။ စကားအေျပာအဆိုမဆင္ျခင္တာမ်ိဳး ၊သတိမမူဘဲ ေျပာမိလိုက္ေသာစကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ေျဖ႐ွင္း ရလိမ့္မယ္။ ကံၾကမၼာ အနည္းငယ္ညံ့ေနခ်ိန္ပါပဲ, အနီးကပ္လူေတြရဲ႕ ဒုကၡေပးျခင္းခံရမည္။ ေသခ်ာၾကံစည္လုပ္ကိုင္ ထားေသာအလုပ္ေတြပ်က္ရတတ္တယ္, ခရီးေဝးသြားျခင္း ေ႐ွာင္႐ွားသင့္တဲ့ ကာလပါ…
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထြေထြထူးထူးေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ေတာ့ သတိထားရတတ္ပါသည္။ သည္းေျခမွစ၍ျဖစ္ေသာေရာဂါ၊ အပူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ရ တတ္ ပါ တယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္မယ္, ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးမဲ့သူေတြ ဝန္းရံေနတတ္တဲ့အတြက္သတိထားပါ, အခ်စ္ေရးေကာင္း ေနတတ္ပါသည္…
လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ အေပါင္းအသင္းမ်ားထဲမွ ခ်စ္သူ ေတြ႕ရတတ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳးကြဲျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မေကာင္း ေသး ပါ, အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတတ္ပါ သည္။ ပညာေရးအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ွိ တတ္ပါသည္, ပညာေရးအတြက္ ဇြဲ၊ ဝီရိယ စြမ္းအား စိုက္ထုတ္မႈမ်ားသာ မိမိကအားစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈၊၄၊၅အထူးေဟာ စကားေျပာဆင္ျခင္တာအညံ့အဆိုးေတြ ကင္းပါလိမ့္မယ္။ယၾတာ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လႉ ေပးပါ။
လူအမ်ားၾကား ထင္ေပၚပါလိမ့္မယ္။ လူအမ်ားရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္းခံရမည္။ဒီကာလအတြင္းမိမိတို႔ျဖစ္ခ်င္တာ ေတြကို ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မ်ားအလုပ္ေအာ္ဒါေတြမ်ားၿပီး မအားလပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရ တတ္ပါတယ္။ အေတြးမွန္ အျမင္မွန္ အယူအဆမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြျဖစ္ထြန္းေနမွာပါပဲ။ ခရီး သြားဖို႔လဲ အေၾကာင္းဖန္ လာပါလိမ့္မယ္, အယူအဆမတူ အေတြးအေခၚမတူသူေတြၾကား မိမိကေစ့စပ္ညိႇဳႏိႈင္း ေပးလိုက္ ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္….
ဒီကာလအတြင္း အမႈကိစၥၾကဳံရသူေတြ အမႈအခင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္, စိတ္ဝမ္းကြဲေနသူမ်ားအားနားဝင္ေအာင္ေျပာျပျခင္းျဖင့္အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္,စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ျမက္စြန္းမႈ ရ႐ွိေနတတ္ပါသည္, သူမ်ားကဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အနည္းငယ္ေမွးမွိန္ေနတတ္ပါသည္, ခ်စ္သူေဟာင္း၏ စြန္႔ခြာမႈကို ခံရတတ္ပါသည္, ခ်စ္သူအသစ္၏ ခ်စ္ေရးဆိုမႈကိုလည္း ခံရတတ္ ပါသည္…
အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ အေသာက္အစားမ်ားေနတဲ့အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ၾကံ့ခိုင္သန္းစြမ္းမႈ ႐ွိေန တတ္သလို က်န္းမာေရး ေဝဒနာ လည္း နည္းပါးေနတတ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ေသြးသားမသန္႔႐ွင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ ေသာ အေရျပားေရာဂါကိုေတာ့သတိထားပါ…
အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇၊ဝ၊၄အထူးေဟာ လိမ္မေျပာပါနဲ႔။ယၾတာ ေပါင္မုန္႔ ၅ခ်ပ္ဘုရားကပ္လႉပါ။
ရရက္သားသမီးအေပါင္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေဘးႏွင့္ ကပ္၃ပါးေဘးမွ ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ
ဆရာၿငိမ္းေအးလူ ေဗဒင္သုေတသီ အားခရက္ဒစ္ေပးပါသည္…
Categories ဗေဒင် ယတြာ Leaveacomment
ဒီရာသီဖွားတွေရဲ့ထူးခြားချက်က တော်ပြီး ချစ်စရာကောင်းကြတာပါ။ သူတို့တွေက အသစ်တစ်ခုခုကို သင်ယူလေ့လာဖို့အမြဲစိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေကအကြောင်းအရာများစွာကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒီအလုပ်အကိုင်တွေကတော့ သူတို့တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Studying atacafe
ဒီအလုပ်က မေထုန်တွေနဲ့အကိုက်ညီဆုံးအလုပ်အကိုင်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ သူတို့တွေရဲ့အားသာချက်က လူမှုဆက်ဆံရေးပါ။ ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တွေက တခြားသူတွေကို လှု့ဆော်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိကြပါတယ်။
ဒီရာသီဖွားတွေက Communication မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ဒီအလုပ်နဲ့လည်း သူတို့ကိုက်ညီကြပါတယ်။ သူတို့တွေက စကားလုံးတွေကို တခြားသူတွေအတွက် အမြဲအမှတ်ရနေအောင် ပြောဆိုနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီအလုပ်က မေထုန်တွေအတွက် သီးသန့်အလုပ်အကိုင်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ မေထုန်တွေက တခြားဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူလေ့လာဖို့အမြဲစိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်က မေထုန်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူတို့မှာ အားကောင်းတဲ့ communication စွမ်းရည်ရှိကြတာပါ။
ဒီအလုပ်က မေထုန်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မေထုန်တွေက အလုပ်တွေအများကြီးကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲလုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီဖြားေတြရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ေတာ္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းၾကတာပါ။ သူတို႔ေတြက အသစ္တစ္ခုခုကို သင္ယူေလ့လာဖို႔အၿမဲစိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြကအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ ဒီအလုပ္အကိုင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအလုပ္က ေမထုန္ေတြနဲ႔အကိုက္ညီဆုံးအလုပ္အကိုင္ေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ သူတို႔ေတြရဲ႕အားသာခ်က္က လူမႈဆက္ဆံေရးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္နဲ႔ကိုက္ညီပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြက တျခားသူေတြကို လႈ႕ေဆာ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္႐ွိၾကပါတယ္။
ဒီရာသီဖြားေတြက Communication မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ဒီအလုပ္နဲ႔လည္း သူတို႔ကိုက္ညီၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြက စကားလုံးေတြကို တျခားသူေတြအတြက္ အၿမဲအမွတ္ရေနေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါတယ္။
ဒီအလုပ္က ေမထုန္ေတြအတြက္ သီးသန္႔အလုပ္အကိုင္လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေမထုန္ေတြက တျခားဘာသာစကားေတြကိုသင္ယူေလ့လာဖို႔အၿမဲစိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္က ေမထုန္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သူတို႔မွာ အားေကာင္းတဲ့ communication စြမ္းရည္႐ွိၾကတာပါ။
ဒီအလုပ္က ေမထုန္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေမထုန္ေတြက အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲလုပ္ႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
စီးပွား လာဘ်လာဘ ကြွယ်ဝ စေရန် မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲ ထိုးနည်း
September 17, 2021 by Shwengwe Games
မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ကန်တော့ပွဲသုံး ပစ္စည်းများအား အသုံးပြုရမည်…။(၁) အုန်းသီးတစ်လုံး။ (၂) ငှက် ပျောသီး(၃)ဖီး။(၃) ကွမ်း ၊ ကွမ်းသီး ၊ ထုံး ၊ ဆေး။(၄) သပြေပန်း။(၅) ထီး ၊ တံခွန် ၊ ကုက္ကား ၊ မုလေးပွား ၊ ယပ် ၊ ကြက်လျှာအစုံ။(၆) ဆီမီး (၁)တိုင်။(၇) ရေတစ်ခွက်။(၈) ခံတောင်း(သို့)ဇလုံတစ်ခု။(၉) အခြားလှူဒါန်းဖွယ်ရာ ပစ္စည်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
မိမိနေအိမ်ရှိ ဘုရားခန်း၌ပြုလုပ်နိုင်သည်။မဟာလာဘံ ကန်တော့ပွဲထိုးသည့် အချိန်ကာလမှာ နံနက်ပိုင်းဖြစ်ရမည် မဟာလာဘံ ကန် တော့ပွဲထိုးသင့်သည့်အခြေအနေမှာ လောကီစီးပွားနှင့် ဓနစ္စာ ကြွယ်ဝစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်သင့်သည်။မဟာလာဘံ ကန်တော့ပွဲထိုးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားနှင့်အရည်အသွေးမှာယောကျာ်း|မိန်းမ မရွေးပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း
အကျင့်မှန်ကန်၍ စိတ်တည်ငြိမ်သူဖြစ်ကာလောကီအတတ်ပညာအား တတ် မြောက်ထားသူဖြစ်ပါက ပို၍သင့်လျော်ပေသည်။မဟာလာဘံကန်တော့ပွဲထိုးခြင်းအကျိုးတရားကဤကန်တော့ပွဲသည်စီးပွားလာဘ်လာဘနှင့်ဓနဥစ္စာ ကြွယ်ဝစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်သောကန်တော့ပွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် (၁)စီးပွားဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်း (၂)မျက်နှာ ပွင့်လန်းခြင်း (၃)ငွေကြေးလုံးဝပြတ်လပ်သွားမှုမရှိခြင်းစသည့် အကျိုးတရားများ ရရှိခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့်ကန်တော့ပွဲတွင် ထီး|တံခွန်|ယပ်တို့က ဝဲဘက်မှာထားပြီး ကုက္ကား၊မုလေးပွားတို့ကိုယာဘက်တွင်ထားပြီးအုန်းညှာတံကိုမိမိ၏ဝဲဘက်၌ ထားရှိရမည်။မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့်ကန်တော့ပွဲထိုးလျှင် (၁)ပွဲသာထိုးရပြီး ပွဲသက်တမ်းသည်(၅)ရက်ထားရပါသည်။
Credit – ဆရာကျော်ဇောဟိန်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးပြီး မောက်မာတတ်တဲ့ ရာသီခွင် (၃)ခု
ဒီအချက်တွေကတော့ ဗေဒင်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေအရပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကတော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီရာသီခွင် ၃ခုကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တခြားသူနဲ့မတူဘူး၊ထူးခြားတယ်လို့ ထင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီဖွားတွေက ရာသီခွင်လက္ခဏာအရထိပ်ဆုံးမှာရှိကြပါတယ်။ဘာပဲလုပ်လုပ်သူတို့ကစာရင်းတိုင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိချင်ပြီး အဲဒီလိုရှိနေဖို့အတွက် ထိုက်တန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သူတို့ထက်ဘယ်သူကမှမတော်ဘူး၊မကောင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားကြသူတွေပါ။ ဒီရာသီဖွားတချို့က မောက်မာတတ်ကြပါတယ်။
ဒီရာသီဖွားတွေကတော့ တခြားသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့အထင်ကြီးကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ကြယ်တစ်ပွင့်လို့ခံစားကြပြီး မာနလည်းကြီးကြပါတယ်။
ဒီရာသီဖွားတွေကတော့ သူတို့ဘာလုပ်လုပ် အောင်မြင်မှကြိုက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်းအထင်ကြီးပြီး အရာအားလုံးကိုသိတယ်လို့ထင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကိုတုံးအသူတွေလို့ထင်မြင်စေတဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမွှန်းတင်ကြသူတွေပါ။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးၿပီး ေမာက္မာတတ္တဲ့ ရာသီခြင္ (၃)ခု
ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ေဗဒင္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြအရေျပာထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္လူတိုင္းကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ကိုက္ညီမယ္လို႔မဆိုနိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီရာသီခြင္ ၃ခုကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တျခားသူနဲ႕မတူဘူး၊ထူးျခားတယ္လို႔ ထင္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရာသီဖြားေတြက ရာသီခြင္လကၡဏာအရထိပ္ဆုံးမွာရွိၾကပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္သူတို႔က စာရင္းတိုင္းရဲ႕ထိပ္ဆုံးမွာရွိခ်င္ၿပီး အဲဒီလိုရွိေနဖို႔အတြက္ ထိုက္တန္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ သူတို႔ထက္ဘယ္သူကမွမေတာ္ဘူး၊မေကာင္းဘူးလို႔သတ္မွတ္ထားၾကသူေတြပါ။ဒီရာသီဖြားတခ်ိဳ႕က ေမာက္မာတတ္ၾကပါတယ္။
ဒီရာသီဖြားေတြကေတာ့ တျခားသူေတြကိုဆြဲေဆာင္နိုင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔အထင္ႀကီးၾကပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ၾကယ္တစ္ပြင့္လို႔ခံစားၾကၿပီးမာနလည္းႀကီးၾကပါတယ္။
ဒီရာသီဖြားေတြကေတာ့ သူတို႔ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မွႀကိဳက္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အရမ္းအထင္ႀကီးၿပီး အရာအားလုံးကိုသိတယ္လို႔ထင္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။တျခားသူေတြကိုတုံးအသူေတြလို႔ ထင္ ျမင္ေစတဲ့အထိကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အမႊန္းတင္ၾကသူေတြပါ။
သူများကို ဆရာကြီး အလုပ်နိုင်ဆုံး ရာသီခွင် (၃) ခု
ဒီရာသီဖွားတွေကတော့ အရာရာကို ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းသူတို့သိပြီးသားလို့ ထင် မြင်နေသူတွေဖြစ်ကြပြီး သူများတွေကို ဆရာကြီးလုပ်ချင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူများကို နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ဆရာလုပ်လိုက်ရမှာကျေနပ်ကြသူတွေက ဘယ်ရာသီခွင်တွေများဖြစ်မလဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
ဒီရာသီဖွားအများစုက သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်တာ၊ ဆရာကြီးလုပ်တာအကျင့်ပါနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း လူတွေကိုကူညီချင်တာကြောင့် အခုလိုဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်ကစပြီး သူတပါးကို ဝေဖန်တာမျိုး၊ ဆရာကြီးလုပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
ဒီရာသီဖွားတွေက အရာရာကို အ ဆက်မပြတ်စူးစမ်းလေ့လာရတာ ဝါသနာပါပါတယ်။ သူတပါးအကြောင်းကိုလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အရမ်းသိချင်၊ ဝင်ပါချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘဲ သူတပါးကိစ္စတွေမှာ ဆရာကြီးဝင်လုပ်တာကို လျှော့ပါ။ ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။
ဒီရာသီဖွားတွေက တခြားသူတွေကို ဝေဖန်တာ၊ ဆရာကြီးလုပ်တာတွေက ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးလေးစားတာမျိုးရယူချင်ကြပါတယ်။ သူတပါးကိုလည်း အရာရာပြုပြင်လိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကိုစိတ်ပူနေမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တာဝန်ပိုယူတာမျိုး၊ ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးတာမျိုးကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ တခြားသူတွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့။
ဒီရာသီဖြားေတြကေတာ့ အရာရာကို ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းသူတို႔သိၿပီးသားလို႔ ထင္ ျမင္ေနသူေတြျဖစ္ၾကၿပီး သူမ်ားေတြကို ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားကို နည္းနည္းေလးျဖစ္ျဖစ္ ဆရာလုပ္လိုက္ရမွာ ေက်နပ္ၾကသူေတြက ဘယ္ရာသီခြင္ေတြမ်ားျဖစ္မလဲ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ။
ဒီရာသီဖြားအမ်ားစုက သူတစ္ပါးကို ေဝဖန္တာ၊ ဆရာႀကီးလုပ္တာအက်င့္ပါေနၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း လူေတြကိုကူညီခ်င္တာေၾကာင့္ အခုလိုျဖစ္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး သူတပါးကို ေဝဖန္တာမ်ိဳး၊ ဆရာႀကီးလုပ္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႕။
ဒီရာသီဖြားေတြက အရာရာကို အ ဆက္မျပတ္စူးစမ္းေလ့လာရတာ ဝါသနာပါပါတယ္။ သူတပါးအေၾကာင္းကိုလည္း ဒီလိုပါပဲ။ အရမ္းသိခ်င္၊ ဝင္ပါခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္ဘဲ သူတပါးကိစၥေတြမွာ ဆရာႀကီးဝင္လုပ္တာကို ေလွ်ာ့ပါ။ ဘယ္သူမွ မျပည့္စုံနိုင္ပါဘူး။
ဒီရာသီဖြားေတြက တျခားသူေတြကို ေဝဖန္တာ၊ ဆရာႀကီးလုပ္တာေတြက ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ကိုယ့္ကို အထင္ႀကီးေလးစားတာမ်ိဳးရယူခ်င္ၾကပါတယ္။ သူတပါးကိုလည္း အရာရာျပဳျပင္လိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ကိုယ္မလုပ္နိုင္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးကိုစိတ္ပူေနမယ့္အစား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တာဝန္ပိုယူတာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္အတြက္အခ်ိန္ေပးတာမ်ိဳးကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ တျခားသူေတြအတြက္ အခ်ိန္ကုန္မခံပါနဲ႕။
လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်မလွှတ်တတ်တဲ့ ရာသီခွင် (၃)ခု
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကိုစိတ်ကြီး၊ မစိတ်ကြီးတိုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင် တော်ရုံခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘဲ ဒေါသကြီးကြသူတွေပါ။ ဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲ။
ဒီရာသီဖွားတွေကို စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဝေးဝေးမှာနေလိုက်ပါတော့။ သူတိုကိုအချိန်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီအချိန်က လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သလဲ နှစ်ချီပြီးလည်း ကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ Cap တွေ စိတ်ဆိုးရင် တစ်နှစ်လောက်စကားမပြောတာမျိုးပါ။ ကိုယ်တွေ့ပါနော်။
ဒီရာသီဖွားတွေက သနားကြင်နာတတ်တာကို လူသိများပေမဲ့ သူတိုကိုဒေါသထွက်အောင် သွားစလိုတော့မရပါဘူး။ သူတိုကိုစိတ်တိုအောင်လုပ်မိရင် လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်မလွှတ်တတ်ကြပါဘူး။ သူတိုနဲ့နောက်ထပ်ရင်းနှီးဖို အခွင့်အရေးနှစ်ခါမရနိုင်တော့ပါဘူး။
ဒီရာသီဖွားတွေကလည်း ကိစ္စတစ်ခုကို လွယ်လွယ်နဲ့မေ့မပစ်တတ်တဲ့ထဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတိုကို ရန်မစမိအောင်နေပါ။ သူတိုက Cap တွေ၊ Pisces တွေလောက် ဒေါသမကြီးတတ်ပေမဲ့ သူတိုက မေ့ပစ်ဖိုတော့ ခက်ခဲကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ကိုစိတ္ႀကီး၊ မစိတ္ႀကီးတိုအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဆိုးၿပီဆိုရင္ ေတာ္႐ုံခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘဲ ေဒါသႀကီးၾကသူေတြပါ။ ဘယ္သူေတြမ်ားျဖစ္မလဲ။
ဒီရာသီဖြားေတြကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေအာင္လုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေဝးေဝးမွာေနလိုက္ပါေတာ့။ သူတိုကိုအခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က လေပါင္းမ်ားစြာၾကာႏိုင္သလဲ ႏွစ္ခ်ီၿပီးလည္း ၾကာသြားႏိုင္ပါတယ္။ Cap ေတြ စိတ္ဆိုးရင္ တစ္ႏွစ္ေလာက္စကားမေျပာတာမ်ိဳးပါ။ ကိုယ္ေတြ႕ပါေနာ္။
ဒီရာသီဖြားေတြက သနားၾကင္နာတတ္တာကို လူသိမ်ားေပမဲ့ သူတိုကိုေဒါသထြက္ေအာင္ သြားစလိုေတာ့မရပါဘူး။ သူတိုကိုစိတ္တိုေအာင္လုပ္မိရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ခြင့္မလႊတ္တတ္ၾကပါဘူး။ သူတိုနဲ႔ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးဖို အခြင့္အေရးႏွစ္ခါမရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ဒီရာသီဖြားေတြကလည္း ကိစၥတစ္ခုကို လြယ္လြယ္နဲ႔ေမ့မပစ္တတ္တဲ့ထဲမွာ မပါပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုကို ရန္မစမိေအာင္ေနပါ။ သူတိုက Cap ေတြ၊ Pisces ေတြေလာက္ ေဒါသမႀကီးတတ္ေပမဲ့ သူတိုက ေမ့ပစ္ဖိုေတာ့ ခက္ခဲၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
၇ ရက် သားသမီးများ အတွက် တပတ်စာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ဟောစာတမ်း 12.9.2021 မှ 17.9.2021
September 13, 2021 by Shwengwe Games
ဒီကာလအတွင်းမိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စများ၊မိသားစုအလုပ်ကိစ္စများ အရှုပ် အထွေးတွေရှိရင် ဖြေရှင်းနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
အကြီးအကဲမိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။အထူးသဖြင့်ဖခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအားနည်းနေတတ်ပါတယ်။
မိသားစုအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။သားသမီးကျန်း မာရေးကိုဂရု စိုက်ပါ။
အချစ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အချို့က အရမ်းအဆင်ပြေပြီးအချို့ကအဆိုးဆုံးအနေအထားဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကောင်းအားဆိုးအားနှစ်မျိုးစလုံးကြုံရတတ်တယ်အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမယ်။မိမိအတွက်များစွာအိမ်ထောင်ဘက် အကူအညီရ တတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့ အာရုံကြော၊ နှလုံး ရောဂါတွေ ဂရုစိုက်လိုက်ပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/3/6 အထူးဟော အညံ့အဆိုးတွေများနေတတ်ပါတယ်။ယတြာ အရမ်းမွှေးသောပန်းများကို ဘုရားပူဇော်လိုက်ပါ။
စိတ်ကူးအယူအဆများက လွတ်မြောက်ရာကိုအားပြုလုပ်နေမိတတ်ပါတယ်။တစ်ခုခုကို စိတ်တိုင်းမကျဘဲဒီသောကတွေကြားကပြေးထွက်ချင်နေတတ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေပေမဲ့မိမိကိုအစစအရာရာကူညီပေးနိုင် သူကတစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စပဲရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေရဲ့နာရေးသတင်းတွေကြားနေရတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့သိပ်အဆိုးကြီး မဖြစ်ပေမဲ့ အသွားအလာ အလှုပ်အရှားများလွန်းတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတတ်ပါတယ်။
စည်းစိမ်းချမ်းသာနှင့်ဓနဥစ္စာတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသံယောဇဉ်တွေကိုဖြတ်ချင် နေမိတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 3/4/0အထူးဟော ကံသင့်ပါတယ်။ယတြာ နွားနို့ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ဒီကာလမှာတော့အလုပ်စီးပွားကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ လုပ်သမျှစီးပွားရေးတွေကမိမိအမြင်ကျယ်လေ တိုးတတ်လေပါပဲ။
ဒီကာလမှာပါးပါးနပ်နပ်တွေးတောလုပ်ကိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အိုင်တီနဲ့ဆက်နွယ်သောအလုပ်များ၊မီးနဲ့ချက်ပြုတ်ရသော အ လုပ်များ၊စက်ပြင်အလုပ်များအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်လုပ်လေအဆင်ပြေလေပါပဲ။တပည့်တွေ၊ကျေးဇူး ရှိဖူးသူတွေလာရောက်ကန်တော့တာထောက်ပံ့တာမျိုးကြုံရ တတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့ဒီကာလ အညောင်း မိတာများပြီး ဝမ်းချုပ်တာ၊ဇက်ကြောတတ်တာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
ရွှေနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းများအဆင်ပြေတိုးတတ်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီရနိုင်သလိုဆရာသမားတွေဆီကအကြံကောင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။
အလုပ်သစ်၊ဆိုင်သစ်စီးပွားသစ်စတင်လို့ကောင်းပါတယ်။ စန်းအားနည်းနေချိန်မို့အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့တတ်နိုင်သမျှကိုယ်က လျှော့ပါ။
အိမ်ထောင်ဘက်ကအလုပ်များပြီးဂရုမစိုက်နိုင်တာကို မိမိကခွင့်လွှတ်ပေးဖို့လိုပါ တယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/5/8အထူးဟော အလုပ်စီးပွားထင်ရှားစွာတိုးတတ်မည်။ယတြာ အသက်ကြီးသူများကိုလိုအပ်တဲ့အားဆေးလှူလိုက်ပါ။
ဒီအပတ်ထဲမှာလုပ်သင့်တာတွေကိုပဲဦးစားပေးလုပ်ပါ။မိမိစိတ် တိုင်းကျဘာမှလုပ်မရပါဘူး၊မိမိကံအားနည်း နေချိန်မို့ မိမိအတွေးအခေါ်ကလဲချွတ်ချော်နေတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်သလို မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ တတ်နိုင်သမျှအလုပ်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေမလုပ်နဲ့အုံး။
ကျန်းမာရေးကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ပူ ဖို့သိပ်မလိုသေးတဲ့ကာလပါပဲ။စကားအပြောအဆိုတော့ထိန်းပါ။
ချစ်သူအခက်အခဲတွေရှိရင်တော့မိမိကကူညီပေးလိုက်ပါ။အိမ် ထောင်ရေးမှာတော့အနည်းငယ်စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/5/6 အထူးဟောစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖြစ်ရမည်။ယတြာမိမိပတ်ဝန်းကျင်းကသူတွေကိုအိတ်ဆောင်တရားစာအုပ်လေးတွေလှူလိုက်ပါ။
စိတ်ကူးကောင်းအယူအဆကောင်းတွေရှိပေမဲ့လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။မိသားစုအရေး၊လူမှုရေးတွေမှာ တာဝန်တွေပိနေတတ်ပါတယ်။
မိမိစီးပွားအတွက်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အချိန်မရ တဲ့ကာလပါပဲ။ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက်တတ်နိုင်သ၍အကူအညီတွေပေးခွင့်ရလာတတ်ပါတယ်။
ဒီကာလမှာပြဿနာဖြစ်ရတတ်လို့ပါပဲ။သတင်းအလုပ်၊ကိုယ် စားလှယ်အလုပ်များနှင့်အကျိုးဆောင်အလုပ်များအခွင့်အလမ်း သစ်တွေရလာတတ်ပါတယ်။
စပ်တူကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ရှေ့တိုးရခက်၊နောက် ဆုတ်ရခက်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအညံ့များနေတာကိုသိသင့်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 0/3/6 အထူးဟော စိတ်ညစ်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။
အလှူအတန်းအလုပ်များ၊ဘာသာရေး အလုပ် များလုပ်ခွင့်ကြုံရတတ်ပါတတ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပက်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းမြေ့ရတတ်ပါတယ်။
တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဆောင်တွေရလာတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးကိစ္စ တွေမှာထင်သလောက်အဆင်မပြေနိုင်သေးပါ။ ချစ်သူနဲ့ စကားများပြဿနာတတ်ရတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး အားနည်းမှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/4/7အထူးဟော ကံမြင့်မားနေမည်။ယတြာ အိမ်ရှေ့လာသောအလှူခံတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းထည့်ဝင်လိုက်ပါ။
အကောင်းများတဲ့ကာလပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ငွေကံပွင့်နေတာတော့တွေ့ရပါတယ်။
အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။စန်းအားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ချစ်သူသစ်ရတတ်ပါတယ်။လူသိမခံတဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း အချစ်ရေးမျိုးကြုံလာရတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင် ရေးကိစ္စတွေမှာ အိမ်ထောင်ဘက်က အဝေးသွားတာ၊အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။
အနာ ရောဂါတွေရှိရင်ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ချောပို့အလုပ်များအော်ဒါများများရလိမ့်မယ်။
ဖခင် အတွက်စိတ်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းနေရာအပြောင်း အရွှေ့တွေ မထင်မှတ်ဘဲ ကြုံရမည်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/5/9 အထူးဟော စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရတတ်ပါတယ်။ယတြာ ရှေ့ဟောင်းဘုရားတစ်ဆူဆူတွင် အဓိဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်ခြင်းတွေစတင်လိုက်ပါ။
ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ) 0977 5555 695//09 44 5555 695
၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် ယတြာလုပ်နည်း
September 11, 2021 by Shwengwe Games
၁၁ရက်နေ့အတွက်ယတြာကုသိုလ်ပြုပါတယ် မနက်ဖြန်ကနေ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ
လာဘ်ပွင့်ချင်သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဒီယတြာကို ရှဲပြီးလုပ်ပါ မနက်ဖြန်မနက် ၆:ဝဝကနေ ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန် ယတြာသံပုရာ၂ခွက်ကိုဖျော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကပ်လှုပါ ဖယောင်းတိုင်၂တိုင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ပေးပါ
ဆုတောင်းရမှာပါ ယနေ့မှစပြီးငွေဝင်ရပါလိုပါတယ် အရောင်းအဝယ်ကောင်းရလိုပါတယ် ထီပေါက်စေလိုတယ်ဟု အရှင် ဘုရားဟုဆုတောင်းပါ တစ်ရက်ပဲလုပ်ရမှာပါ ရှဲပြီးမှယတြာကိုလုပ်ပါနှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်
ကံတွေတက်ပြီးအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေရလာပါလိမ့်မယ် ရှဲပြီးမှယတြာလုပ်ပါ ရရက်သားသမီးတွေ ဒီယတြာကိုတွေ့တော့လိုက်လုပ်ကျတော့ မိမိလဲကုသိုလ်ရပါတယ်ငွေလဲပိုဝင်ပါတယ်
ဆရာတစ်နေ့တစ်ခါ တစ်ပတ်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ယတြာကို ရှဲပြီးလိုက်လုပ်ကျတဲ့သူတွေအားလုံး နှစ်ပတ်အတွင်းငွေဝင်ထီပေါက်စီးပွားတကိကျပါစေလို့ ဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ဆရာစီမှာ ငွေဝင်ထီပေါက်လာဘ်ပွင့် အရောင်း အဝယ်ကောင်း အစွမ်းထက်ယတြာများ တစ်လတစ်ခါပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဝ၉၇၆၀၆၄၈၅၈၅ မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဘိုက်ဘာမှာလာပြောပေးပါ
Ctrdit to ဆရာထူးမြတ်အောင်
၁၁ရက္ေန႔အတြက္ယၾတာကုသိုလ္ျပဳပါတယ္ မနက္ျဖန္ကေန၂ပတ္အတြင္း ေငြဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းခ်င္တဲ့သူေတြကံတက္ခ်င္တဲ့သူေတြ
လာဘ္ပြင့္ခ်င္သူေတြ ထီခ်ဲေပါက္ခ်င္တဲ့သူေတြဒီယၾတာကို ရွဲၿပီးလုပ္ပါ မနက္ျဖန္မနက္ ၆:ဝဝကေန ၉:၀၀ အတြင္းျပဳလုပ္ရန္ ယၾတာသံပုရာ၂ခြက္ကိုေဖ်ာ္ၿပီးျမတ္စြာဘုရားကိုကပ္လႈပါ ဖေယာင္းတိုင္၂တိုင္ပါ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ေပးပါ
ဆုေတာင္းရမွာပါ ယေန႔မွစၿပီးေငြဝင္ရပါလိုပါတယ္ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းရလိုပါတယ္ ထီေပါက္ေစလိုတယ္ဟု အရွင္ ဘုရားဟုဆုေတာင္းပါ တစ္ရက္ပဲလုပ္ရမွာပါ ရွဲၿပီးမွယၾတာကိုလုပ္ပါႏွစ္ပတ္အတြင္း သိသိသာသာ ေငြဝင္လာပါလိမ့္မယ္
ကံေတြတက္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈတိုးတက္မႈေတြရလာပါလိမ့္မယ္ ရွဲၿပီးမွယၾတာလုပ္ပါ ရရက္သားသမီးေတြ ဒီယၾတာကိုေတြ႕ေတာ့လိုက္လုပ္က်ေတာ့ မိမိလဲကုသိုလ္ရပါတယ္ေငြလဲပိုဝင္ပါတယ္
ဆရာတစ္ေန႔တစ္ခါ တစ္ပတ္တစ္ခါတင္ေပးတဲ့ယၾတာကို ရွဲၿပီးလိုက္လုပ္က်တဲ့သူေတြအားလုံး ႏွစ္ပတ္အတြင္းေငြဝင္ထီေပါက္စီးပြားတကိက်ပါေစလို႔ ဆရာကဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္
ဆရာစီမွာ ေငြဝင္ထီေပါက္လာဘ္ပြင့္ အေရာင္း အဝယ္ေကာင္း အစြမ္းထက္ယၾတာမ်ား တစ္လတစ္ခါျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဝ၉၇၆၀၆၄၈၅၈၅ မွာဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ဘိုက္ဘာမွာလာေျပာေပးပါ
Ctrdit to ဆရာထူးျမတ္ေအာင္
၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း .. 9.9.2021 မှ 15.9.2021 အထိ
September 9, 2021 by Shwengwe Games
ဒီကာလအတွင်း မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စများ၊ မိသားစုအလုပ်ကိစ္စများ အရှုပ်အထွေးတွေရှိရင် ဖြေရှင်းနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းများ အထားမှားနေတဲ့ပစ္စည်းများမထင်မှတ်ဘဲပြန်တွေ့တတ်ပါတယ်။ အသိမ်း လွန်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်တွေ့တတ်ပါတယ်။
အကြီးအကဲမိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့်ဖခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအားနည်းနေတတ်ပါတယ်။ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေသူများသတိထားပါ။ အမှား အယွင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးအဖမ်းအစီးခံရတတ်ပါတယ်။ အများနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ကိုင်ခြင်းက ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းတတ်ပါ တယ်။ မိမိအကြံအစည် စိတ်ကူးထက် အခြားသူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးလုပ်တာကပိုမိုအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။
အိမ်ခြံတခါးမလုံခြုံသူများသတိထားပါ။ သူခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်။ လူထူထပ်တဲ့ နေရာတွေကိုသွားလာခြင်းတွေ ရှောင်လိုက်ပါ။ မိသားစုအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ သားသမီးကျန်း မာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။ အချစ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အချို့က အရမ်းအဆင်ပြေပြီး အချို့က အဆိုးဆုံးအနေအထားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကောင်းအား ဆိုးအား နှစ်မျိုးစလုံးကြုံရတတ်တယ်။
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမယ်။ မိမိအတွက်များစွာ အိမ်ထောင် ဘက်အကူအညီရ တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အာရုံကြော၊ နှလုံးရောဂါတွေ ဂရုစိုက်လိုက်ပါ။အကျိုးပေးဂဏန်း 2/3/6 ။အထူးဟော အညံ့အဆိုးတွေများနေတတ်ပါတယ်။ယတြာ အရမ်းမွှေးသောပန်းများကို ဘုရားပူဇော်လိုက်ပါ။
စိတ်ကူးအယူအဆများက လွတ်မြောက်ရာကိုအားပြုလုပ်နေမိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို စိတ်တိုင်းမကျဘဲ ဒီသောကတွေကြားက ပြေးထွက်ချင်နေတတ်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ အလုပ်က နယ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတာ၊အလုပ်ပြုတ် တာ ဌာနပြောင်းတာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေပေမဲ့ မိမိကိုအစစအရာရာကူညီပေးနိုင် သူကတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စပဲရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေရင်းတွေရဲ့နာရေးသတင်းတွေကြားနေရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ သိပ်အဆိုးကြီး မဖြစ်ပေမဲ့ အသွားအလာ အလှုပ်အရှားများလွန်းတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်း နယ်နေတတ်ပါတယ်။အလုပ်သစ်တွေ၊စီးပွားသစ်တွေရှိတဲ့အခါ အနှောက်အယှက်အတားအဆီးတွေရှိနေတတ်တာ တွေ့ရတယ်။ မိမိအဆင်ပြေသွားမှာကို မနာလိုတဲ့သူတွေရှိနေတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ အခက်အခဲတွေရှိရင် သစ္စာတရားပြု ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ပြေလည်တတ်ပါတယ်။
မိမိကိုအထင်သေးသူများတောင် လေးစားချစ်ခင်ခြင်းခံရတတ်ပါ တယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့အမွေမှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကောင်းစွာစည်းရုံး သိမ်း သွင်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိကိုအကျိုးတူပူးပေါင်းရန်လာရောက်ကမ်းလှမ်းခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ စည်းစိမ်း ချမ်းသာနှင့်ဓနဥစ္စာတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသံယောဇဉ်တွေကို ဖြတ်ချင် နေမိတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ သဘောစိတ်ကူးမတူတာတွေများနေတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 3/4/0 ။အထူးဟော ကံသင့်ပါတယ်။ယတြာ နွားနို့ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ဒီကာလမှာတော့ အလုပ်စီးပွားကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ လုပ်သမျှစီးပွားရေးတွေက မိမိအမြင်ကျယ်လေ တိုးတတ်လေပါပဲ။ ဒီကာလမှာ ပါးပါးနပ်နပ်တွေးတောလုပ်ကိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အိုင်တီနဲ့ဆက်နွယ်သောအလုပ် များ၊မီးနဲ့ချက်ပြုတ်ရသော အလုပ်များ၊ စက်ပြင်အလုပ်များအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့တိုင်ပင် လုပ်လေအဆင်ပြေလေပါပဲ။တပည့်တွေ၊ကျေးဇူးရှိဖူးသူတွေ လာရောက်ကန်တော့တာ ထောက်ပံ့တာမျိုးကြုံရ တတ်ပါတယ်။
ရပ်ဝေးကချိတ်ဆက်ထားသောအလုပ်တွေက ပိုမိုအားကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအလုပ် များအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ ဒီကာလ အညောင်းမိတာများပြီး ဝမ်းချုပ်တာ၊ဇက်ကြောတတ် တာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ရွှေနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းများ အဆင်ပြေတိုးတတ်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ကောင်း တွေရဲ့အကူအညီရနိုင်သလို ဆရာသမားတွေဆီကအကြံကောင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။
အလုပ်သစ်၊ဆိုင် သစ် စီးပွား သစ်စတင်လို့ကောင်းပါတယ်။ စန်းအားနည်းနေချိန်မို့ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ တတ်နိုင်သမျှကိုယ်က လျှော့ပါ။ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများရာကနေ အပြီးပြတ်သည်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်အားနည်းပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်ကအလုပ်များပြီးဂရုမစိုက်နိုင်တာကို မိမိကခွင့်လွှတ် ပေးဖို့လိုပါ တယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/5/8 အထူးဟော အလုပ်စီးပွားထင်ရှားစွာတိုးတတ်မည်။ ယတြာ အသက်ကြီးသူများကိုလိုအပ်တဲ့အားဆေးလှူလိုက်ပါ။
ဒီအပတ်ထဲမှာလုပ်သင့်တာတွေကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ်ပါ။ မိမိစိတ်တိုင်းကျဘာမှလုပ်မရပါဘူး၊ မိမိကံအားနည်း နေချိန်မို့ မိမိအတွေးအခေါ်ကလဲ ချွတ်ချော်နေတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထင်သ လို မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ တတ်နိုင်သမျှအလုပ်အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေမလုပ်နဲ့အုံး။ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စ၊အမွေ ကိစ္စတွေ မှာတော့ မိမိကဦးဆောင်ပြီးတော့ မဆောင်ရွက်ပါနဲ့။
ကျန်းမာရေးကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ပူ ဖို့သိပ်မလိုသေးတဲ့ကာလပါပဲ။စကားအပြောအဆိုတော့ထိန်းပါ။ စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှုတ်ကျွံတော့နှုတ်မရဆိုတာ မျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်သောခရီးတွေရက် ရွှေ့ပြီးမှအဆင်ပြေရတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အကြွေး ဟောင်းတွေပြန်ဆပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စက်ကားဝယ်ယူမယ်ဆိုအနာအဆာပါလာတတ်ပါတယ်။
သတိနဲ့ယှဉ် ပါ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေကို ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခိုင်းစေခြင်းကို သတိရှိပါ။ မိမိပိုင်ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ် တွေသူများကို ရင်းနှီးတယ်ဆိုပြီးမငှားလိုက်ပါနဲ့။အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ သင့်တော်ရုံကောင်းပါတယ်။ ချစ်သူ အခက်အခဲတွေ ရှိရင်တော့ မိမိကကူညီပေးလိုက်ပါ။အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အနည်းငယ်စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါ တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်က အရာရာပျင်းရိနေလို့ မိမိအတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/5/6 အထူးဟော စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖြစ်ရမည်။ ယတြာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်းကသူတွေကို အိတ်ဆောင်တရားစာအုပ်လေးတွေလှူလိုက်ပါ။
စိတ်ကူးကောင်း အယူအဆကောင်းတွေရှိပေမဲ့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။ မိသားစုအရေး၊လူမှုရေးတွေမှာ တာဝန်တွေပိနေတတ်ပါတယ်။ မိမိစီးပွားအတွက် ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အချိန်မရ တဲ့ကာလပါပဲ။ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက် တတ်နိုင်သ၍အကူအညီတွေပေးခွင့်ရလာတတ်ပါတယ်။ ငွေက အဝင်များ အထွက်များဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကြွေးမြီးကိစ္စတွေတက်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။
မလိုအပ်ဘဲ အဖိုးတန် ပစ္စည်းများမဝယ်သင့်တဲ့ကာလပါ။မထင်မှတ်ဘဲခရီးတိုတွေ သွားနေရတတ်ပါတယ်။ စုတ်ကိစ္စမရှုပ်ပါနဲ့။ ဒီကာလမှာ ပြဿနာဖြစ်ရတတ်လို့ပါပဲ။သတင်းအလုပ်၊ကိုယ်စားလှယ် အလုပ်များနှင့် အကျိုးဆောင်အလုပ်များ အခွင့်အလမ်း သစ်တွေရလာတတ်ပါတယ်။ စပ်တူကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်ရ တတ်ပါတယ်။ ရှေ့တိုးရခက်၊နောက်ဆုတ်ရခက် အနေ အထားမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအညံ့များနေတာကိုသိသင့်ပါတယ်။ တစ်ခုခုအနေအထိုင်အစား အသောက် မဆင်ခြင်တာနဲ့ ရောဂါဝင်လာနိုင်မဲ့ကာလပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အဆိုးမရှိပါ။ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေမဲ့ကာလတွေပါပဲ။ အချစ်ရေးကတော့ ကိုယ့်ထက်ငယ်သူနဲ့ ချစ်ကြိုက်နေသူဆို အနည်းငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါ တယ်။အသွားအလာကန့်သတ်ထားပေမဲ့ ဟိုလိုက်ပို့ခိုင်း ဒီလိုက်ပို့ခိုင်းလုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 0/3/6 အထူးဟော စိတ်ညစ်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ ယတြာ ဘုရားရှင်အားအလင်းတိုင်၃တိုင်ကပ်လှူပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကိုသက်စေ့ရွတ်ပွားပါ။
ကံကြမ္မာကအလင်းရောင်ပေးမဲ့ကာလပါပဲ။ မိမိက အခွင့်အရေးတွေရလာရင်အသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ မိမိလိုချင်နေတဲ့ အလှအပလက်ဆောင်တွေရလာတတ်ပါတယ်။ ငွေကံကောင်းပေမဲ့ ပေးရကမ်းရကိစ္စလေးတွေလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ မိမိကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာရာကိစ္စတွေမှာ အားကုန်ထည့်ပြီးဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ အိမ်ထောင် ပရိဘောဂဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကာလဝယ်ပါ။ ခရမ်းရောင် ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးအိမ်လာလည်ရင်တော့ ကံကောင်းတတ်တာမို့ ထီကံစမ်းလိုက်ပါ။
စပ်တူအလုပ်များကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးရပိုင်ခွင့် တွေကြန့်ကြာနေတာမျိုးရှိရင်ရလာတတ်ပါတယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စလေးတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ရောင်းချင်၊ ဝယ်ချင်တာ တွေရှိနေရင်တော့ မြန်မြန်ဝယ်၊မြန်မြန်ရောင်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကုန် ပစ္စည်းအသစ်များကို စတင် ဖြန့်ချီခြင်းတွေ၊ အွန်လိုင်းကနေကြေငြာခြင်းတွေစတင်သင့်တဲ့ကာလပါပဲ။
အလှူအတန်း အလုပ်များ၊ဘာသာရေး အလုပ် များလုပ်ခွင့်ကြုံရတတ်ပါတတ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပက်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းမြေ့ရတတ် ပါတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဆောင်တွေရလာတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စ တွေမှာ ထင်သလောက်အဆင်မပြေနိုင်သေးပါ။ ချစ်သူနဲ့ စကားများပြဿနာတတ်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး အားနည်းမှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/4/7 ။အထူးဟော ကံမြင့်မားနေမည်။ ယတြာ အိမ်ရှေ့လာသောအလှူခံတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းထည့်ဝင်လိုက်ပါ။
ကံအဆိုးထက်အကောင်းများတဲ့ကာလပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ငွေကံပွင့်နေတာတော့တွေ့ရပါတယ်။ ကုန်ကြွေးတွေ၊လုပ်အားခအကြွေးတွေရှိရင်ရလာ တတ်ပါတယ်။စိတ်ထဲ တစ်ခုခု ကြံစည်လုပ်ကိုင်ချင်တာမျိုးပေါ်လာရင် ထလုပ်ကြည့်ပါ။ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ စန်းအားကောင်းနေနိုင် ပါတယ်။ ချစ်သူသစ်ရတတ်ပါတယ်။ လူသိမခံတဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း အချစ်ရေးမျိုးကြုံလာရတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင် ရေးကိစ္စတွေမှာ အိမ်ထောင်ဘက်က အဝေးသွားတာ၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ လိင်မတူ သူတွေရဲ့အကူအညီတွေရလာတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်ရလဒ်ကောင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။အနာ ရောဂါ တွေရှိရင် ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ချောပို့အလုပ်များ အော်ဒါများများရလိမ့်မယ်။ ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတတ်၊လစားတိုးခြင်းတွေအထူးကြုံရတတ်ပါတယ် ။
သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်အနာအဆာတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးနေမိ တတ်ပါတယ်။ မိမိစိတ်ထဲ စိတ်ကောင်းဝင်နေတတ်ပါ တယ်။ ပျော်စရာတွေများများကြုံရလိမ့်မယ်။ ဆရာဟောင်း တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံဆည်းခွင့်ရလာတတ်ပါတယ်။ ဖခင် အတွက်စိတ်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းနေရာအပြောင်း အရွှေ့တွေ မထင်မှတ်ဘဲ ကြုံရမည်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/5/9 အထူးဟော စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရတတ်ပါတယ်။ ယတြာ ရှေ့ဟောင်းဘုရားတစ်ဆူဆူတွင် အဓိဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်ခြင်းတွေစတင်လိုက်ပါ။
ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ)0977 5555 695 ။ 09 44 5555 695
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်မှ ၊ (၁၅) ရက်အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာ ဟောစာ တမ်းများ ဖြစ်သည်။
အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘော ဆောင်သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘော ဆောင်သည့် မကောင်း သော ဟောပြောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေ သတည်း။
မိတ်ဆွေတို့၏ ကောင်းကျိုးများကို အစဉ် အမြဲ လိုလားသော